जनवरी 4, 2015 सेप्टेम्बर 25, 2017 साइन्स इन्फोटेक	अनुसन्धान, आणविक, आणविक उर्जा नेपाललाई आवश्यक किन ?, आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा उत्पादन, आणविक बम, उत्खनन गरे देशको कायापलट, उत्पादन, ऊर्जा, ऊर्जा उत्पादन, एल्लो केक, कौडीमै पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि, खानी तथा भूगर्भ विभाग, खोज, खोज तथा अनुसन्धान, गोपाल भण्डारी, नेपाल सरकारको भावी बैज्ञानिक कदम, नेपालको युरेनियम : विदेशी चासो, नेपालमा आणविक ऐन, नेपालमा खानी क्षेत्रको विकास, नेपालमा युरेनियम, नेपालमा युरेनियम पाईने ठाउँहरु, नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थबारे कानुन, परमाणु बम, फ्याट म्यान, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड, मुस्ताङ, युरेनियम, युरेनियम अक्साइड्, युरेनियम र यसको महत्व, युरेनियमका गुणहरु र दोषहरु, युरेनिया, लोमान्थाङ क्षेत्र, सम्भावना मात्र कि उत्खनन योग्य पनि ?, हिरोसिमा, हिरोसिमा र नागासाकी
बिशेष खोज तथा अनुसन्धानात्मक लेख
भनिन्छ “बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड” । नेपाल तुलनात्मक रूपमा सानो मुलुक भए पनि प्राकृतिक सम्पदा र यसको विविधताका कारण धनी मुलुक हो । पर्यटन र जलस्रोत विकासका दृष्टिकोणले अपार सम्भावना छ । तर यी सम्भावनालाई यथार्थतामा बदल्न निकै प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस बाहेक पनि खानीजन्य उत्पादनलाई पनि नकार्न सकिने अवस्था छैन । मुस्ताङको लोमन्थाङ पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठाउँ हो । खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले माथिल्लो मुस्ताङमा बहुमूल्य युरेनियमको ठूलो खानी रहेको पत्ता लगाएको छ । लोमान्थाङ क्षेत्रको १० किलोमिटर लम्बाइ र ३ किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रमा युरेनियम भण्डार भेटिएको हो । सन् १९९० कै परीक्षण अनुसार मकवानपुर धियालको तीनभंगाले–कालोपानी खोला क्षेत्रमा करीब ५ सय १२ मिटरको लम्बाइ र १५ मिटर मोटाइमा युरेनियम भण्डार रहेको अन्वेषण गरिएको छ । तीनभंगालेको युरेनियम भण्डार रहेको कालोपानी खोला छेउको भाग खुला छ, अन्यत्र भने माटोले छोपिएको छ । कस्तुरीले आफ्नो नाभीमा भएको बास्ना खोज्दै अन्यत्र दौडन्छ भने जस्तै हाम्रो नेपाल सरकारलाई यस्तो बहुमुल्य धातु कालीगण्डकीमा सालीग्रामको महत्व नभए जस्तै भई राखेको छ । यसले माल पाएर पनि चाल नपाएको जस्तो अनुभूति गर्ने हामी नेपालीको प्रवृत्तिलाई कौडीमै पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि भन्ने भनाईको स्मरण पनि गरायो । बिश्वका ठुला उदाउदा हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन र भारतले आणविक भट्टीको बिकास गर्नुका साथै अन्तरिक्षमा रकेट पठाइसके । औद्योगिक विकास गरिरहेका छिमेकी भारत र चीन युरेनियमको सम्भावित बजार हुन सक्छ । आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि भारतले संसारकै ठूलो भण्डार रहेको अष्ट्रेलियासँग युरेनियम किन्ने गरेको छ । युरेनियम विद्युत उत्पादनको मुख्य स्रोत पनि बन्दै गएको छ ।
चित्र : माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्र
चित्र : युरेनियम ओरलाई प्रशोधन गरी “एल्लो केक” बनाउदै
भनिन्छ बिकास नै जीवन हो । बिकासले परिपक्वता र अनुभवको परिणाम स्वरुप आउने प्रगातिशील क्रमिक परिवर्तनलाई बुझाउछ । खानी तथा भूगर्भ विभाग नेपाल सरकारको एक एकाई हो जसले सम्पूर्ण भौगोलिक सर्वेक्षणहरू खानी उत्खनन खोज, व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धि नियम र कानूनको विकास, भू–वैज्ञानिक अन्वेषण र अध्ययन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेदारी लिएको संस्था हो । अन्य देशको तुलनामा खानी तथा भूगर्भ विभागको इतिहास निकै छोटो ६०÷६५ वर्ष मात्र भएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धानको १ सय ५० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३ सय वर्षभन्दा बढी भएको पाइन्छ । ती मुलुकमा अहिले पनि भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान जारी राखी नयाँनयाँ कुरा पत्ता लागिरहेका छन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । खानी विभागले अलि व्यवस्थित रूपमा अध्ययन अनुसन्धान शुरू भएको ३०÷३५ वर्ष मात्र पुगेको छ । विभागले अध्ययन, अनुसन्धान गरी जेजति उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, त्यो भौतिक पूर्वाधारको कमी र विभिन्न निकायका ऐननियम बाझेका कारण राष्ट्रले त्यसको पनि पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको छैन । भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित भूगोलमा पुग्नैपर्छ । अहिलेसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धानले के देखाउँछ भने खनिज पदार्थका हिसाबले प्रत्येक भूभागको आआफ्नै महत्व छ । प्रत्येक भूभागमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भेटिएका छन् र भविष्यमा पनि भेटिने सम्भावना छ । खाँचो छ, नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, भौतिक पूर्वाधार र धैर्यको माध्यमबाट पत्ता लागेका खनिज पदार्थको सदुपयोग गर्नुका साथै नयाँनयाँ भण्डार पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
जलसम्पदाकै हाराहारीमा देशमा खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना रहे पनि हालसम्म १२ प्रकारका खनिज पदार्थमात्र उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । देशका विभिन्न ९५ स्थानबाट हाल चुनढुङ्गा, कोइला, फलाम, काइनाइट, म्याग्नेसाइट, मार्बल, क्वार्ज, क्वार्जाइट, रेड क्ले, खरी, टुमालिन र जिङ्क उत्खनन भइरहेको छ । विभागमा ८४ वटा खानीजन्य उद्योग दर्ता भए पनि दुई दर्जनमात्र सञ्चालित छन् । दाङ, रोल्पा, सल्यान, प्युठान र पाल्पामा कोइला तथा पर्वतमा फलाम खानी सञ्चालित छन् भने राष्ट्रका अन्य भागमा उपलब्ध तामा, सिसा, अभ्रक, गन्धक, स्लेट, गेरु र ग्रेफाइट उत्खनन हुन सकेको छैन । गरगहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य धातु टुर्मालाइन जाजरकोटमा पाइए पनि उत्खनन गर्न बाँकी नै छ । खानी तथा खनिजजन्य उद्योगहरूको प्रशासनिक, प्राविधिक, आर्थिकलगायत अनुगमनसहित सबै अधिकार प्राप्त खनिज मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । खानी तथा खनिज अन्वेषणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, यस क्षेत्रको विकाससम्बन्धी अध्ययन, तालिम, अन्वेषण, सर्वेक्षण तथा प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरणको जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको भए पनि बेग्लै ऐन बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आवश्यक ऐन नियम बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै खानी तथा खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुहुन्छ । खानी, पानी, पर्यटन र मानव संशाधनको समूचित विकास एवम् दोहनबाट राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सङ्कल्प राजनीतिक नेतृत्वले नगरेसम्म आर्थिक क्रान्ति कोरा कल्पनामात्र हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरीकाले हानेका दुई शक्तिशाली एटम वमले धेरै नै ठूलो धन जनको क्षति भएको थियो । सन् १९४५ युरेनियम–२३५ बाट निमिर्त लिटिल ब्वाय र युरेनियम–२३८ बाट परिमार्जित गरी बनाइएको फ्याट म्यान नामका परमाणु बम जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा विस्फोट गराइँदा करिब ७५ हजार मानिस मारिए भने ५० हजार भवनहरु ध्वस्त भएका थिए । एटम बम ज्यादै ज्वलनशील र विस्फोटक किसिमको विभाजन हुन सक्ने पदार्थ युरेनियम ९ग्चबलष्गm० र प्युलोटोनियम ९एगितयलष्गm० बाट बनाईन्छ । एटम बम विस्फोटन हुँदा एकैछिनमा एक्कासी लाखौँ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्न पुग्छ । यसमा बमको सबै भाग ग्याँसमा बदलि चाप वायुमण्डलको भन्दा लाखौँ गुणा बढी हुन्छ र वरपरको हावालाई चाप्दै यो तिव्र गतिमा फैलिन थाल्दछ । बिस्फोटन भएको समयमा आगोको ज्वाला निस्केको हुन्छ र त्यहि समयमा आगोको विशाल भकुण्डो अति तातो हावासंग सँगै निस्कन्छ । यसबाट शक्तिशाली विकिरणहरू उत्पन्न भई परमाणिक प्रतिक्रिया भएको ठाउँबाट पनि त्यतिकै शक्तिशाली न्यूटोन ९ल्भगतचयल० र गामा विकिरण ९न्बmmब च्बमष्बतष्यल० हरू निस्कन्छन् । विस्फोटन भएपछि तातो ग्याँस र विकिरणहरूबाट रंगित मुस्लो बन्छ । २–३ मिनेट भित्रै यो केहि किलोमिटर माथि उठ्छ र च्याउको छाता जस्तो देखिन्छ । विस्फोटनबाट विकिरणहरू वनस्पति र जन्तुहरूको शररि भित्र पस्नाले ठूलो धनजनको क्षति हुन जान्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकी वैज्ञानिक ओपनहाइमरले परमाणु वम बनाएर प्रयोगात्मक रूपमै पृुष्टि गरिदिए । उनले नाभिकीय विखण्डन प्रतिक्रियाबाट पदार्थको केही अत्यन्तै सानो अंशलाई मात्र भएपनि शक्तिमा बदलेर देखाइदिए । वास्तवमा परमाणु वममा नाभिकीय प्रतिक्रियाबाट पदार्थ शक्तिमा बदलिन्छ तर त्यहाँ अत्यन्तै थोरै मात्राको पदार्थमात्र शक्तिमा बदलिएको हुन्छ । पदार्थ पूर्ण रूपमा शक्तिमा बदल्ने प्रविधिको विकास भने अहिलेसम्म विश्वमा भइसकेको छैन ।
युरेनियमको सदुपयोग भयो भने भौतिक जीवनका लागि अभिन्न मित्र बन्न सक्छ । दुरुपयोग गरियो भने यसले संसारका सबै प्राणीलाई नष्ट गर्न पनि सक्छ । एक किलो ग्राम युरेनियम २५३ ले झण्डै २० हजार मेगावाट प्रति घण्टा बराबरको ताप उत्पन्न गराउन सक्छ जुन ३० लाख टनको दाउरा बालदा निस्कने ताप बराबर हुन आउँछ । एटम वममा १ ग्राम पदार्थ विलाउँदा २१ अरब किलो क्यालोरी तापशक्ति उत्पन्न हुन्छ । यो भनेको दिनको १० हजार लिटर मट्टितेल जम्मा गर्दै जाँदा २३ वर्षसम्म जम्मा गर्दा जति जम्मा हुन्छ, त्यो सबैलाई एकैचोटी बाल्दा जति तापशकित उत्पन्न हुन्छ त्यति बराबरको ताप शक्ति १ ग्राम पदार्थ बिलाउँदा उत्पन्न हुन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पदार्थलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा कल्पना नै गर्न नसक्ने शक्ति उत्पन्न हुन्छ । युरेनियमबाट उत्पन्न रेडियोधर्मी विकिरणको आविष्कार गर्ने पोल्यान्डकी वैज्ञानिक मेडम क्युरीले सन् १९०३ र सन् १९११ मा दुइटा नोबेल पुरस्कार पाइन् । क्युरीको उक्त आविष्कार आधुनिक विज्ञान क्षेत्रका लागि वरदान नै साबित भयो । कस्तो विडम्बना १ त्यही विकिरणका कारण क्युरीको सन् १९३४ मा मृत्यु भयो । आईएईएका अनुसार विश्वका ३१ मुलुकमा ४ सय ३७ आणविक भट्टी सञ्चालित छन् । १५ मुलुकमा ६८ नयाँ भट्टी निर्माणाधीन छन् । सन् १९८६ को रुसमा भएको चेर्नोविल आणविक दुर्घटना र सन् २०११ को जापानमा भएको फुकुसिमा दुर्घटनाका कारण विश्वभर आणविक भट्टी बन्द गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ । दुर्भाग्य, खानी विभागले पत्ता लगाएको मकवानपुरको तीनभंगाले क्षेत्रको युरेनियमबारे कुनै जानकारी समेत नपाई त्यहाँ बसोवास गर्नेहरू प्रभावित भइरहेका छन् । युरेनियम यस्तो धातु हो, जसले एक पुस्तामा कुनै असर नदेखिए पनि दुई वा तीन पुस्तापछि पनि भयावह असर देखाउन सक्छ । पूरै वंशाणुगत गुण नै ध्वस्त पारिदिन सक्छ । भावी सन्तती पूरै अपांग बनाइदिन सक्छ । आणविक भट्टीहरुका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ युरेनियम विद्युत उत्पादनको शक्तिशाली स्रोत युरेनियमको अभावमा आणविक बम तथा परमाणु परीक्षण सम्भव हुँदैन ।
सम्भावना मात्र कि उत्खनन योग्य पनि ?
भनिन्छ आवश्यकता आविष्कारको जननी हो । तर सुतेको सिहको मुखमा मृग आफै आएर पस्ने त होईन । वि.स.ं २०२१ सालतिर वरिष्ठ जलस्रोतविद डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधी सोधपत्रमा नेपालको सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता ८३००० मेगावाट रहेको तथ्य बाहिर ल्याए । नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि पर्याप्त रूपमा यसको उपयोग हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले उत्पादन हुन सक्ने ४२००० मेगावाटमध्ये केवल ७ सय मेगावाटजति उत्पादन गर्न सकिएको छ । नेपालको आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षमता भनिएको ४२००० मेगावाट हालको जनसङ्ख्या साढे दुई करोडले हिसाब गर्दा सबै क्षमताका जलबिद्युत आयोजना बनाउंदा पनि प्रतिव्यक्ति ७००० युनिट पर्दछ । समृद्धशाली पाश्चात्य मूलुकमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २०००० युनिट भन्दा बढी हुन्छ । तर हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता उपयोग गर्दा पनि पुग्दैन । आगामी २५ वर्षसम्म नेपालको जनसंख्या ४ करोड अनुमान गरिएको हुनाले त्यस समय सम्ममा ४२००० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएमा पनि प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ४६०० युनिट मात्र हुन आउंछ । १०००० युनिट प्रतिव्यक्ति पुयाउंन हामीलाई ८४ हजार मेगावाट २५ वर्ष्भित्र बनाउनुपर्दछ । नेपालका ६० प्रतिशत उपभोक्ता सधै अध्यारोमा बस्छन अनि मागअनुसारको विद्युत आपूर्ति हुनै नसकेको अवस्थामा छ । मल्थसको जनसख्याको सिद्घान्त अनुसार प्रत्येक २५ बर्षमा जनसख्या दोब्बर हुन्छ । तर हाम्रो देशमा भएको जलस्रोतको क्षमता ८३००० मेगावाट भने स्थिर हुन्छ । यो क्षमताले भविश्यको बिधुत मागलाई धान्न सक्दैन । अबको ५०÷१०० बर्षपछि हाम्रा सन्ततीले हामीले भोग्नुपरेको जस्तो लोडशेडीङ्गको दुःख भोग्नु नपरोस भन्ने कामना मात्र नगरी हामीले आणविक उर्जातर्फ दिर्धकालीन सोचका साथ लाग्नुपर्दछ ।
चित्र : आणविक भट्टीबाट बिजुली उत्पादन
कौडीमै पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि
मार्च 29, 2016 साइन्स इन्फोटेक नेपाल सरकारको भावी बैज्ञानिक कदम मा टिप्पणी गर्न मनाही छ